Zavatra maro loha no nihtsoka vokatr’izany toy ny asa fivelomana izay tena maharary ny isan-tokantrano tokoa, ny fianarana…. Manoloana izany dia samy maniry ny hisokafan’ny fihibohana avokoa ny rehetra mba hiverenan’ny fiainana amin’ny laoniny. Tsy olana ho an’ny vahoaka ny fanaovana aron-tava, ny fanajana ilay elanelana 1 metatra, ny fampiasana ilay gel mamono mikraoba fanosotra amin’ny tanana isaky ny mivoaka saingy ny mahaporitra ny rehetra dia ny mba hahafahana miasa mandrapaharivan’ny andro manomboka amin’ny herinandro ho avy io hanetsemana ny banga rehetra teo aloha. Santionany amin’izany ireto tafaresaka tamin’ny gazety Tia Tanindrazana ireto.
Rtoa Vonisoa, manao asa tenany : "Tena tokony efa vahana ilay fihibohana fa noana ny vahoaka. Lasa mihiboka manaraka ilay zava-misy avokoa mantsy ny zava-drehetra, indrindra fa ny fidiram-bola. Ilay fampandehanana ny fiainana amin’ny andavanandro mihitsy no tena olana. Tsy misy ny vola nefa ny fahasahiranana tsy hay lazaina intsony".
Benja, mpamily taxi-be: "Tena efa tokony vahana amin’izay io fihibohana io. Ohatra ny asanay zao dia miaina fatiantoka isan’andro. Voafetra ny ora hiasana nefa ny versement henjehina. Ny olona entina ihany koa voafetra ihany amin’ny coronavirus. Zara raha mahita sakafo ho an’ny vady aman-janaka izahay isan’andro."